I-Lake Winnipesaukee Waterfront Island Cottage - I-Airbnb
I-Lake Winnipesaukee Waterfront Island Cottage
Tuftonboro, New Hampshire, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Anna
I-wifi esheshayo engu-105 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
Kuthule, ukushona kwelanga kubheke i-cottage & bunkhouse emanzini! Amathani edekhi, i-U-dock embozwe ngokujulile kanye notshani obunotshani elangeni losuku lonke. Itholakala endaweni evikelekile yemidlalo yasemanzini, ukudoba, nokubhukuda. Indawo emaphakathi inikeza ukufinyelela ezindaweni ezidumile zeLake Winnipesaukee. I-Island inikela ngamamayela angu-4+ wemizila yangaphakathi nezwe kanye nolwandle lwedolobha olunesihlabathi. Uhambo olufushane lwemayela elilodwa ngesikebhe ukusuka endaweni yokupaka izimoto/ama-trailer mahhala kanye nokwethulwa kwesikebhe ekugcineni komgwaqo i-Long Island. **Ukuqashwa kwamasonto onke ngoLwesihlanu kuya kuLwesihlanu** **Kumelwe ube nesikebhe**
I-cottage iyindlela yokubaleka emangalisayo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Lonke udonga lwamafasitela olubheke emanzini luvumela ukukhanya okwanele futhi lunikeze imibono kusuka noma yikuphi endlini. Umqondo ovulekile wenza kube lula ukuthi wonke umuntu abe ndawonye! Hlanganyela ngosuku lwemvula ngemidlalo yebhodi, izindida, amakhadi, noma incwadi. Qala ukusa kwakho ngekhofi ubukele ithrafikhi yesikebhe intanta endaweni engavuki. Hlala emadekhini ukuze uthole i-tan noma ucashe emthunzini we-pavilion. Jabulela ukudla kwakho onqenqemeni lwamanzi ngetafula lokudlela elingaphandle noma endaweni yokudlela ekhishini endaweni yokupholisa umoya. Thatha isihlwathi ku-hammock futhi ulalele izinyoni. Hamba uyozihambela emahlathini anomthunzi wezihlahla. Geza ogwini olunesihlabathi esingaphansi kwamadokodo ethu noma ukhiphe isikebhe sakho uyothola imidlalo ethile emanzini! Qedela usuku ngeshawa yangaphandle eqabulayo futhi uhlabe phansi ngama-s'mores endaweni yomlilo. Singakuqinisekisa kungakhathaliseki ukuthi ukuphi awusoze waphuthelwa ukushona kwelanga!
I-wifi esheshayo – 105 Mbps
I-HDTV engu-42" ene- I-Amazon Prime Video
I-Cow Island iyisiqhingi sesibili esikhulu kunazo zonke eLake Winnipesaukee. Inikeza ngaphezu kwamamayela amane emizila ephawulwe kahle futhi egcinwe kahle eholela ezimfihlo eziningi ezifihliwe zesiqhingi. Kukhona ulwandle olunakekelwa yidolobha ohlangothini olusenyakatho-mpumalanga olutholakala kalula ngemizila evela ekotishi. Ugu lolwandle lungamayadi angaba ngu-30 ogu olunesihlabathi olubhekene nezintaba ezinhle ze-Ossipee. Ikotishi litholakala ohlangothini olusenyakatho-ntshonalanga yesiqhingi ngaphakathi kwendawo engavuki.
Izotholakala ngemibuzo nezincomo nganoma yisiphi isikhathi esiholela kukho konke ukuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tuftonboro namaphethelo